Grayscale Investments ẹkedori ise ọhụrụ cryptocurrency ego na 2018
Grayscale Investments, nke mere ka ọ dịrị ya mfe mainstream investors ka nzọ na Bitcoin, ezube na-enye ọhụrụ anọ otu-ego kaadị ego na ọzọ dabeere na a nkata digital ego site na mmalite nke April.
"Site na njedebe nke mbụ nkeji iri na ise nke afọ a, anyị ga-nwee ngụkọta nke asatọ ego ngwaahịa,"Grayscale Managing Director Michael Sonnenshein kwuru N'ajụjụ ọnụ Tuesday na Vancouver.
Grayscale mbụ Bitcoin Investment Trust, nke hapụrụ n'elu-na-na-counter na Amerịka, ka surged karịa 1,300 percent n'afọ gara aga dị ka institutional investors gbochiri ịzụ digital ego ozugbo o achọ ikpughe na uru nke cryptocurrencies.
Sonnenshein kwuru na ego a ga-ahaziri dị ka Bitcoin Investment Trust, enye investors ike iji nweta n'ebe digital ego site zuo nke a nche.
Sonnenshein kwuru "Nke ụgbọala ga-jide top mmiri mmiri digital ego, ọ ga-abụ ahịa okpu-dara nha, na echiche ziri ezi na a quarterly ndabere. "
The New York dabeere ike na-"na-eburu anyị ntị na-emeghe ka ihe investors chọrọ n'ebe,"Sonnenshein kwuru. "Ọ bụrụ na e nwere ndị ụfọdụ ego na investors na-arịọ anyị ka Ọdịdị ngwaahịa gburugburu, mgbe ahụ, anyị chọrọ ịbụ na e nwere iji na-egbo na ina. "
Weiss fim gị n'ụlọnga Okwu akara ule na cryptocurrencies – Bitcoin na-akawanye C +
weiss Ratings, mba na-eduga onwe ha fim gị n'ụlọnga nke ego oru, taa tọhapụrụ ndị mba mbụ mgbe akara ule na cryptocurrencies site a ego fim gị n'ụlọnga.
Gịnị na-eme Weiss 'abanye cryptocurrency ratings ịrịba bụ ya akụkọ ihe mere eme nke onwe na izi ezi na ndị ọzọ ego ndi, dị ka e kwuru site U.S. Government aza Office (Gao), Barron si, The Wall Street Journal, na The New York Times, n'etiti ndị ọzọ.
The Weiss Cryptocurrency Ratings inwale price ize ndụ, ụgwọ ọrụ nwere, blockchain technology, doo, nche, na ihe ndị ọzọ. "N'ihi na ngwa ngwa mgbanwe data,"Na-akọwa Weiss, "Upgrades na downgrades bụ ọzọ Ugboro karịa ndị ọzọ ndi anyị ekpuchi."
Bitcoin (gosiri C +) akawanye magburu onwe scores maka nche na ebe nile doo. Ma, ọ na-izute isi network bottlenecks, na-eme ka na-egbu oge na elu azụmahịa-akwụ ụgwọ. N'agbanyeghị ufiop na-aga n'ihu mgbalị na-enwe ụfọdụ mbụ ọma, Bitcoin enweghị ozugbo usoro maka ozugbo upgrading ya software koodu.
weiss Ratings, nke malitere na 1971, udu 55,000 oru na investments. N'adịghị ka Standard & ogbenye si, Moody si, Fitch na A.M. Best, Weiss mgbe anabata akwụ ụgwọ nke ụdị ọ bụla si entities ya udu.
Straipu na-agwụcha Bitcoin support
Ịkwụ Ụgwọ processor straipu agaghịkwa na-akwado Bitcoin dị ka a ugwo usoro malite April 2018.
Straipu malitere ịnabata Bitcoin na 2014 ma kwuziri Bitcoin na azụmahịa ụgwọ na dịtụ onye na-adịghị nkwenye ugboro dị ka echiche maka igbu ya mmekọrịta na Bitcoin.
South Korean ọchịchị leruo cryptocurrency mgbanwe’ nche
South Korean Bitcoin mgbanwe e nyochara na ọ dịghị onye kwesiri nche ụkpụrụ, dị ka South Korean ọchịchị. Onye ọ bụla nke 8 mgbanwe nyochara e weere na ha “ezughi oke” ma kwe nkwa e mere ka mma ha nche.
New iwu ga-amụba Iwu na ịtọ oge ụkpụrụ nduzi maka ndị a mgbanwe iji kwalite iji izute ndị a chọrọ ma ọ bụ na-eche ihu na o kwere omume mmechi.
Nke a na-egosi na South Korean ọchịchị na-na-ewere cryptocurrency mgbanwe kpọrọ ihe ma akpọrọ nche.
Digital Ego Auditor Friedman LLP ewepu niile kwuru banyere nke Bitfinex si website
Friedman LLP, a digital ego auditor ọrụ, wepụrụ ọ bụla gara aga banyere Bitfinex dị ka a ahịa, na wepụrụ nke ọ kpọrọ aha ha si ha ozi ọma oriri.
Nke a na-abịa dị ka suspicions na-eto eto nke na mmekọrịta dị n'etiti Bitfinex na tether ka USDT (tether tokens) na-na-minted site nde a gara aga izu.
City na Vermont iji blockchain maka ala ndekọ ndia
Obodo South Burlington, Vermont, na-trialing a ala ndebanye usoro nke na-eji blockchain dị ka akụkụ nke a usoro maka Ndekọ nwe.
The City Ọdee si Office mara ọkwa Monday na a partnering na blockchain mmalite Propy echekwa ala ndekọ management data, dị ka a pịa ntọhapụ. The pilot Nzube bụ ịzụlite a rụọ ọrụ nke ọma na ala Ledger maka ezigbo ala na ụlọ azụmahịa na ihe ọzọ ihe mgbaru ọsọ nke na-eleru otú ọma iji a blockchain dabeere ikpo okwu ga-belata na-akwụ ụgwọ nke na-akpakọba ala management data mgbe tụnyere omenala na usoro.
South Burlington si City Ọdee, Donna Kinville, kwuru na obodo “bụ mgbe mmasị na-uru nke technology na enhances ya nnyefe nke ọrụ bi. Anyị dị njikere ịmụta na nke a Propy pilot.”
Nordea akụ bans ọrụ si trading Bitcoin
Nordea, a Northern European akụ dabeere si Finland, gwara ya nile 31,500 ọrụ ha nwere ike ghara ahia Bitcoin.
Nordea ga wetara ya ban si Feb. 28, mgbe ya osisi kwetara na-ewere nguzo ruru ka "unregulated ọdịdị" nke ahịa, spokeswoman Afroditi Kellberg kwuru site ekwentị on Monday.
"Ọ bụ ebe nile na-eme gafee ụlọ akụ ụlọ ọrụ nke igbochi onye na akaụntụ na-emeso nke mkpara iji gbochie ha na-ewere ọnọdụ ke ada investments, ma ọ bụ nke nwere ike itinye ha na a n'ihe ize ndụ nke mfu ego, ya mere mmetụta ha nweruru ego,"Kellberg kwuru. "Nordea mere, dị ka ihe niile mmiri, nwere ikike setịpụrụ atumatu na mpaghara ebe a na-emetụta ndị ọrụ ya. "
Nordea kwuru ya iwu "na-agụnye ndị mepere ndokwa mkpara na ẹdude ojiji na-enye ohere maka ụfọdụ wezụga." Were n'ọrụ bụ ama aka Bitcoin na-"kwere na-ẹdude ojiji."
Nordea bụ nke mbụ isi European akụ iji wetara ndị dị otú ahụ a ban.
Previous Post:Ònye bụ John Hyman, ma ọ bụ ihe anyị maara banyere ndị Telegram ego ndụmọdụ
Next Post:Robotrading ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka Trading